PICS: Zimbabwe's children suffer the most from economic crisis
A girl crosses a busy road while carrying water containers in Harare, Friday, 9, 2019. Fuel prices and the general cost of living continue to rise in Zimbabwe as the public struggle against basic shortages of water and power. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
By FARAI MUTSAKA Aug 11, 2019
Harare — It is only a few hours since Zimbabwe's schools closed for month-long August holidays, and 13-year-old Tanyaradzwa is already milling outside a bar "doing business," he says.
A young boy smiles while carrying a basket to a popular market in Harare. Picture: AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi
A young girl carries a bucket of water, left, as a woman throws away garbage at a dumpsite in Harare. Picture: AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi
A girl fetches water from a borehole in Harare. Picture: AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi